huawei आदर7समीक्षा: बिजुली-छिटो औंठाछाप स्क्यानर संग ठोस मध्य-दायरा - समाचार नियम
huawei आदर7समीक्षा: बिजुली-छिटो औंठाछाप स्क्यानर संग ठोस मध्य-दायरा
सम्मान7केहि महान सुविधाहरू एक ठोस मध्य-दायरा स्मार्टफोन छ. सबै औंठाछाप सेन्सर सजिलो र छिटो प्रयोग गर्न भनेर हुनु पर्छ - औंठाछाप सेन्सर व्यापार मा सबैभन्दा छिटो छ.
शीर्षक यो लेख “huawei आदर7समीक्षा: बिजुली-छिटो औंठाछाप स्क्यानर संग ठोस मध्य-दायरा” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, लागि बिहीबार 27 अगस्ट theguardian.com 2015 16.15 UTC
Huawei गरेको आदर लागि संक्षिप्त7सरल छ: बैंक तोड छैन कि एक ठोस स्मार्टफोन बनाउन.
यो एक "प्रमुख हत्यारा" बहाना छैन, र छैन, तर अन्तर्गत £ 250 को लागि राम्रो प्रसाद भरिएको छ कि एक बजार मा, नयाँ सहित OnePlus2र तेस्रो-पुस्ता मोटो G, गर्न सक्छन्, यकीनन, व्यापार मा सबैभन्दा छिटो औंठाछाप स्क्यानर यसलाई खडा बनाउन?
सरल, understated डिजाइन
एक धेरै छिटो र प्रभावकारी औंठाछाप सेन्सर पछाडि क्यामेरा अन्तर्गत अवस्थित छ, दायाँ जहाँ आफ्नो चोर औला बस्छन संग लाइन मा. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सम्मान7एक सरल छ, अपेक्षाकृत आकर्षक डिजाइन. शरीर धातु हो, हुनत यो प्रिमियम प्लास्टिक-जस्तै महसुस दिन्छ कि यो एक कोटिंग छ. सामने एक Selfie ढाँचा र अगाडिको फ्लैश सबै ग्लास छ. यो पछिल्लो भनेर बाहिर sticks क्यामेरा र तल औंठाछाप स्क्यानर छ - यो सबै एकदम understated छ.
निर्माण गुणस्तर बस औसत भन्दा माथि छ: गिरा यदि उनि एकदम सजिलै मार्क गरिनेछ जस्तै धूर्त र प्लास्टिक माथि र तल कुनामा महसुस हुँदा शरीर flexes.
यो 5.2in पूर्ण HD स्क्रिन एकदमै कुरकुरा र राम्रो देखिन्छ, तर यस्तो ग्यालेक्सी S6 को 5.1in स्क्रिन रूपमा छेउ-छेउमा उच्च पिक्सेल घनत्व संग ट्रयाक्टर HD स्क्रीन संग noticeably कम बाक्लो छ.
सम्मान7यो गर्न राम्रो तुलना OnePlus 2, जो यस्तै 1080 स्क्रिन छ.
8.5mm मा फोन मध्य-दायरा मूल्य लागि अपेक्षाकृत पातलो र हल्का छ. को OnePlus तुलना2उदाहरणका लागि, यो 1.35mm पतली र लाइटर 18g छ.
मानक शक्ति र मात्रा बटन परे, सम्मान7पनि अतिरिक्त अनुकूलन बटन छ. छोटो प्रेस, लामो प्रेस र डबल प्रेस सबै यस्ता क्यामेरा सुरु रूपमा अनुकूलन कार्यहरू बाँधिएको वा त्यस्तो ट्विटर वा फेसबुकमा रूपमा एउटा अनुप्रयोग सुरु गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ. यो राम्रो काम गर्दछ, यो शक्ति र मात्रा बटन विपरीत छ रूपमा तर संयोगले एकदम धेरै थिचिएको हुन्छ.
पर्दा: 5.2मा पूर्ण HD एलसीडी (424ppi)
प्रोसेसर: Octa-कोर Huawei Kirin 935
राम: 3राम जीबी
भण्डारण: 16जीबी + microSD कार्ड
संचालन प्रणाली: एन्ड्रोइड 5.0 इभोल्युसन युआई संग "ललिपप"
क्यामेरा: 20सांसद पछि क्यामेरा, 8सांसद सामने-सामना क्यामेरा
जडान: दुइटा सिम, LTE, वाइफाइ, NFC, ब्लूटूथ 4.1 र जीपीएस
आयाम: 143.2 x 71.9 एक्स 8.5mm
सम्मान7छैन ब्लक मा सबैभन्दा छिटो स्मार्टफोन छ, तर यसको आफ्नै-ब्रान्ड प्रोसेसर मुद्दा बिना सबैभन्दा कार्य गर्न सक्षम छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सम्मान7Huawei गरेको Kirin समावेश 935 octa-कोर प्रोसेसर. Perfomance ठोस छ, यदि उदेकलाग्दा छैन, मात्र केही चित्रात्मक धनी खेल संग अलिकति stuttering, जबकि राम 3GB अनुसार Multitasking लागि प्रशस्त छ निर्मित राम मनिटर.
म मुद्दा बिना यो मा फाले फोन ह्यान्डल सबै, र कुनै पनि गर्मी मुद्दाहरू ग्रस्त थिएन, Qualcomm गरेको Snapdragon विपरीत 810.
ब्याट्री फोनको "स्मार्ट" शक्ति प्रोफाइल मा एक दिन वरिपरि लामो, जसले ब्याट्री जीवन राम्रो सन्तुलन प्रदर्शन गर्न दाबी, संग रात मा चार्जर फर्केपछि 20% ब्याट्री बायाँ. त्यो सूचना सयौं थियो, इमेल, ट्विटर, फेसबुक, संगीत प्रवाहका र ब्राउजिङ को एक घण्टा.
यो टिप्पण लायक छ कि स्क्रिन 50% चमक केहि हेर्न टाढा पनि मधुरो थियो, र स्वचालित चमक सेटिङ अक्सर स्क्रिन एकदम उज्यालो गरे, जो ब्याट्री जीवन मा खान हुनेछ.
भावना युआई स्क्राच सम्म छैन
huawei तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सम्मान7Android को Huawei गरेको संशोधित संस्करण चल्छ 5.0 भनिन्छ "इभोल्युसन युआई". यो चलिरहेको जस्तै संस्करण हो huawei P8 र नै लाभ र नोकसान छ.
संक्षेपमा, त्यहाँ कुनै अनुप्रयोग दराज घर पर्दामा हरेक अनुप्रयोग संग आइफोन जस्तै बनाउने छ; सूचना ट्रे देखिन्छ र धेरै सूचनाहरू बाहिर थूकना केही अनुप्रयोगहरू संग अलग व्यवहार; सबैभन्दा अनुप्रयोग प्रतीक एक रंग पृष्ठभूमि छ, जो भद्रगोल देखिन्छ, र अन्य अनुप्रयोगहरू अनुकूलन प्रतीक छ, जो एक बिट विकृत हेर्न, यस्तो इन्स्टाग्राम रूपमा.
मानक एन्ड्रोइड ललिपप अनुभव अधिक आकर्षक र slick छ.
इभोल्युसन युआई बारेमा थप विवरण लागि कृपया हेर्न को Huawei P8 समीक्षा को सफ्टवेयर खण्ड.
क्यामेरा अनुप्रयोग रुप र महसूस मा आईफोन क्यामेरा आवेदन समान छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सम्मान7पछाडि एक 20-मेगापिक्सेल क्यामेरा र एक 8 मेगापिक्सेल स्थिर ध्यान Selfie क्याम आउँछ जो, असामान्य, यसको आफ्नै फ्लैश हैंडसेट गरेको कान वक्ता को अन्य पक्षमा राखिएको छ.
यस पछाडिको क्यामेरा तस्वीरहरू विस्तार धनी र अपेक्षाकृत रंग मा सही हो. एफ / 2.4 लेन्स एकदम उद्योग मा सबै भन्दा राम्रो संग बराबर सम्म छैन, एलजी र Samsung संग देखि आफ्नो 1.9 र 2.0 लेंस, जो क्षेत्र र खुसी को एक खोक्रो गहिराई अर्थ Bokeh प्रभाव प्राप्त गर्न कठिन छ.
कुल मिलाएर, यो राम्रो कम प्रकाश प्रदर्शन संग एक सभ्य क्यामरा, को को लाइक संग बराबर मा OnePlus 2.
यो अगाडिको क्यामेरा राम्रो छवि लाग्न सक्छ तर दायरा अभाव र, ध्यान तय भइरहेको, एउटा 8 मेगापिक्सेल क्यामेरा लागि एक उत्सुक विकल्प छ. यो सबै कुरा ध्यान मा पुग्छन् भन्ने हो - वा, तपाईं पनि नजिक भने, केही ध्यान छ. एलईडी फ्लैश पनि धेरै उज्ज्वल छैन.
क्यामेरा अनुप्रयोग धेरै आईफोन-जस्तो छ. बाँया मा एक सरल फोटो चयन, विकल्प HDR र मेनु पछि गाडे एक लोड अन्य सुविधाहरू सक्षम. यो कहिलेकाहीं बिट तस्बिर लिन सुस्त हुन सक्छ. क्यामेरा गरेको सौन्दर्य मोड पनि केही डरलाग्दो फिक्का उत्पादन गर्न सक्छन्, बग-आँखाहरू फोटो.
बिजुली छिटो औंठाछाप स्क्यानर
पछाडि रेखा माथि एक सूचकांक औंला स्क्रिनमा सामना यसलाई होल्ड गर्दा औंठाछाप, तर पनि पछिल्लो देखि अलार्म वा अन्य कार्यहरु चूप गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
यकीनन बजार मा सबै भन्दा राम्रो औंठाछाप स्क्यानर, र आदर बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा 7, बस पछाडि क्यामेरा तलको सेन्सर तपाईं यसलाई भाँचिएको छ लाग्छ त छिटो र सही छ.
यो आफ्नो सूचकांक औंला मारा गर्न सजिलो छ र अन्तर्गत फोन अनलक 0.5 सेकेन्ड. एक सरल ट्याप पर्याप्त छ - कुनै लामो थिचेर र आशा. यो पनि iPhone मा एप्पल गरेको धेरै vaunted टच आईडी भन्दा छिटो र सही छ.
दुर्भाग्यवश, जस्तै OnePlus 2, सम्मान7का औंठाछाप सेन्सर यस्तो Evernote वा LastPass रूपमा तेस्रो पार्टी अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सकिँदैन. एन्ड्रोइड6Marshmallow एन्ड्रोइड मा मूल औंठाछाप समर्थन परिचय र आषा सम्मान को लागि समर्थन विस्तार7र अन्य स्मार्टफोन 'औंठाछाप सेन्सर, सैमसंग गरेको परे.
सम्मान7£ 250 को लागि Huawei अनलाइन स्टोर मार्फत उपलब्ध हुनेछ, जो बनाउँछ यो £ 10 भन्दा बढी महंगा 16जीबी OnePlus 2. तुलना एक लागि 32जीबी सैमसंग ग्यालेक्सी S6 लागत £ 415 र एक एलजी जी4लागत £ 340. Huawei गरेको P8 लागत £ 360.
सम्मान7एक 5.2in स्क्रिनमा स्मार्टफोन लागि अपेक्षाकृत व्यवस्थित छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
क्यामेरा ठोस छ, यो दोहोरो-सिम वा microSD कार्ड समर्थन छ, र अतिरिक्त अनुकूलन बटन राम्रो स्पर्श छ.
यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या यसको सफ्टवेयर छ. भावना युआई जस्तै आकर्षक छैन, प्रयोगकर्ता अनुकूल वा राम्रो मानक एन्ड्रोइड रूपमा डिजाइन5ललिपप अनुभव.
कुल मिलाएर, सम्मान7राम्रो मूल्य एक थप मुख्यधारा चिनियाँ स्मार्टफोन ब्रान्ड हो, तपाईं वास्तवमा भण्डारबाट किन्न भनेर, तर एक ठोस बजेट भेटी भन्दा £ 100 थप खर्च सफाइ पर्याप्त नहुन सक्छ.
पेशेवरों: शानदार औंठाछाप स्क्यानर, ठोस क्यामेरा, सभ्य स्क्रिन, microSD कार्ड स्लट, छिटो चार्ज, सभ्य प्रदर्शन, कुनै थर्मल मुद्दाहरू
नकारात्मक: कुनै वायरलेस चार्ज, भावना युआई राम्रो छैन, Selfie क्याम स्थिर ध्यान छ, गठन गुणस्तर रूपमा केही प्रतिद्वन्द्वी रूपमा राम्रो छैन, दोस्रो सिम मात्र 2G
• OnePlus2समीक्षा: एक वास्तविक 'प्रमुख हत्यारा'?
• सैमसंग ग्यालेक्सी S6 समीक्षा: को iPhone हत्यारा
• एलजी जी4समीक्षा: उपलब्ध सबै भन्दा राम्रो phablets को एक, एक प्रभावशाली क्यामेरा घमण्ड
• गुगल नेक्सस6समीक्षा: ठूलो सुन्दर छ, तर व्यवस्थित छैन
• सोनी Xperia Z3 समीक्षा: ठूलो ब्याट्री जीवन र गुणस्तर क्यामेरा
• एप्पल iPhone6समीक्षा: पतली, छिटो र अलिकति सस्ता
guardian.co.uk © अभिभावक समाचार & मीडिया लिमिटेड 2010
एन्ड्रोइड, लेख, ग्याजेटहरू, मोबाइल फोन, समीक्षा, शमूएल गिब्स, स्मार्टफोन, प्रविधि
← तपाईं म सोच छु के सोच रहे? मन नियन्त्रण वृद्धि मानिस संसारमा-पहिलो pentacontakaitetracopter मा आकास गर्न लिन्छ →